Indima ye-Forex Broker-Funda ukurhweba
Indima ye-Forex Broker
9 October 2019 | Ukuhlaziywa: 2 Novemba 2019
Khankanya igama elithi 'forex' kwisihlwele, kwaye ayisayi kuba ligama elitsha phakathi kwabantu abaninzi. Isizathu kukuba imarike ye-forex inyuka rhoqo, ngoku ithengisa ngaphezulu kwe- $ 5 trillion ngosuku.
Imarike ye-forex yeyona nto iphambili, kwaye wonke umntu ngoku ufuna ukuzibandakanya kuyo.
Kodwa yintoni eyenza intengiso ye-forex ilunge kangaka?
Kukho izizathu zokuba kutheni imarike itsala abathengisi abaninzi. Esinye sezizathu kukuba intengiso ifikeleleka ngokulula.
Nangona kunjalo, esona sizathu siphambili sokukhula ngokukhawuleza kwemakethi ye-forex yimpembelelo yabarhwebi be-forex.
Umrhwebi we-forex sisiseko somlamli esenza ukuthengiselana egameni lomthengi. Abarhwebi babonelela ngeqonga labarhwebi lokuthenga kunye nokuthengisa iimali.
Ukuba nomthengisi ogqwesileyo kuko konke okudingayo ukuqala ngokurhweba nge-forex. Ngomthengisi we-forex, nawuphi na umrhwebi unokufikelela ngokulula kwimarike ye-forex.
Iindima zoMrhwebi we-Forex
Ngaphandle kwamathandabuzo, umthengisi udlala indima ebalulekileyo kwimarike ye-forex. Kodwa njengabaqalayo, uyayiqonda eyiphi indima edlalwa ngabarhwebi? Nazi ezinye zeempawu eziphambili ze-Forex broker:
Unxibelelwano phakathi kwentengiso kunye noMrhwebi
Kwinqanaba elincinci, umrhwebi we-forex umane nje unxibelelwano phakathi kweemarike kunye noMthengisi. Umrhwebi ugqithisa nakuphi na ukufikelela kumrhwebo.
Umzekelo, akunakwenzeka ukuba abathengisi be-novice baye entloko ukuya entloko kunye nabarhwebi abaziingcali kwintengiso.
Ke ngoko, abathengisi bangena ukunceda ukunciphisa isikhewu kunye nokuphucula abathengisi ngeqonga elifanelekileyo lokuthengisa.
Urhwebo egameni labarhwebi
Ngamanye amaxesha abanye abarhwebi banokunikela ngokwenza urhwebo egameni labarhwebi. Umrhwebi ubonelela ngamava kwaye yiyo loo nto yenza ukuba kubengcono kubarhwebi abathengisa ukufumana inzuzo engaphezulu kunokuba bebenokuyenza ngokwabo.
Zininzi iindlela umrhwebi anokwenza ngazo imali kwimarike ye-forex, kunye nabarhwebi njengenye yeendlela ezidumileyo. Ngapha koko, banokusebenzisa iirobhothi zangaphambili (abaCebisi abaCebisi ngee-EA).
Imarike ye-forex isenokungabi lula njengoko inokubonakala ngathi. Ngapha koko, imarike ye-forex ifuna imfundo eninzi kunye nomonde. Ke ngoko, abarhwebi banokubonelela ngeyona mfundo ibalaseleyo kuye nawuphi na umrhwebi.
Ngemfundo esemagqabini, umrhwebi angenza iingeniso ezilungileyo, kwaye abathengisi banikezela ngolwazi ngendlela yokunciphisa ilahleko ngelixa ukwandisa inzuzo.
Kodwa, isebenza njani yonke le nkqubo kunye nomthengisi we-forex?
Ngaphandle koMrhwebi ofuna ukuba imali iqale kurhwebo kwimarike ye-forex, umrhwebi ubalulekile ngokulinganayo.
Umrhwebi uqala ngokuvula iakhawunti kwiqonga lomrhwebi apho kwenziwa lonke uhwebo. Idiphozithi yokuqala iyafuneka ukuqala ukurhweba ukusuka ubuncinci be- $ 10.
Imarike ye-forex isebenza ngokuthi umrhwebi athenge isibini semali asinikiweyo asezantsi aze athengise phezulu ukuze enze inzuzo. Umrhwebi emva koko uthatha inani elithile kuthengiso olwenziwe kwiipips (umlinganiso weerandi).
Nangona kunjalo, ukuphumelela kwintengiso ye-forex kuqala ngohlobo lomrhwebi alukhethayo. Baninzi abathengisi bakho bobabini ababonelela ngeendlela ezahlukeneyo.
Ke ngoko, ngumsebenzi wakhe nawuphi na umrhwebi ukuqinisekisa ukuba umthengisi okhethiweyo unokwethenjelwa kwaye unedumela elihle.
Ke ngoko, ixesha elininzi liyafuneka ukuze kufundwe wonke umthengisi. Uphengululo oluninzi kwi-Intanethi malunga nomthengisi lunokukunceda uhlale phambili malunga nomthengisi othile. Awuyi kufuna ukuvumela umrhwebi ongaziwayo ukuba aphathe imali oyisebenzele nzima.
Ukuba ujonga umthengisi we-forex ephezulu, ungabuyela kuthi Uluhlu lwabarhwebi be forex. Nceda ulumke ukuba uhlala usenza olwakho uphando kwaye uthathe ixesha lakho. Ngaphambi kokuba uqale urhwebo lokwenyani, kuya kufuneka uvule i-akhawunti yeedemo kuqala kunye nawo wonke umntu kuluhlu lwabarhwebi abanomdla ukuze uzame nganye okwethutyana.
Ngenxa yoko, ukuba unqwenela ukurhweba nge-forex ngokuqhubekayo, uya kufuna umthengisi othembekileyo, kwaye imfundo sisitshixo sokufumana izandla zakho ngasekunene.